Amapolisa avule umlilo ngexesha lombhodamo wokulwa ukuvalwa eRotterdam, 7 benzakeleyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands » Amapolisa avule umlilo ngexesha lombhodamo wokulwa ukuvalwa eRotterdam, 7 benzakeleyo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Novemba 20, 2021
Abasi-7 bonzakele njengoko amapolisa evule imbumbulu ngexesha loqhanqalazo oluchasene nokuvalwa komsebenzi eRotterdam.
Abasemagunyeni eRotterdam bakhuphe umyalelo ongxamisekileyo ovala abantu ukuba bahlanganisane kule ndawo “ukugcina ucwangco loluntu”, ngelixa isikhululo sikaloliwe sivaliwe.
Abantu abasixhenxe bonzakele xa uqhanqalazo oluchasene ne elamaDatshi ' izithintelo ezisanda kwaziswa ze-COVID-19 zijike zaba sisidubedube esinobundlobongela edolophini Rotterdam, kwanyanzeleka ukuba amapolisa avulele ngeembumbulu kubaqhankqalazi.
Njengokuba abaqhankqalazi babegqogqa kumbindi wesithili sevenkile, bebasa imililo kwaye begibisela amagosa ngamatye neziqhumane, kwinto leyo usodolophu wesixeko samaDatshi ayibiza ngokuba “sisinyanzelo sobundlobongela”.
RotterdamUSodolophu u-Ahmed Aboutaleb uthe ngentsasa yangoMgqibelo “kumatyeli aliqela amapolisa abona kufanelekile ukutsala izixhobo zawo ukuze azikhusele”.
"[Amapolisa] adubula abaqhankqalazi, abantu benzakala," utshilo u-Aboutaleb. Wayengenazo iinkcukacha ngokwenzakala. Amapolisa nawo adubula ngeembumbulu ezilumkisayo.
Amapolisa athi kwingxelo ethi uqhanqalazo oluqale kwisitalato iCoolsingel “lubangele udushe. Imililo ibaswe kwiindawo ezininzi. Kwaqhunyiswa iziqhushumbisi kwaye amapolisa adubula izihlandlo ezininzi ezilumkisayo”.
“Kukho ukonzakala okunxulumene nokudutyulwa,” longeze amapolisa.
Uninzi lwamapolisa nawo enzakala kolu bundlobongela kwaye amagosa abambe inkitha yabantu kwaye alindele ukubamba abantu abaninzi emva kokufunda imifanekiso yevidiyo kwiikhamera zokhuseleko, utshilo u-Aboutaleb.
Imeko yayisele izolile kamva, kodwa kwakukho amapolisa amaninzi.
Amapolisa aseDatshi athi iiyunithi ezivela kwilizwe liphela ziziswe ukuze "zibuyisele ucwangco" esixekweni.
Uqhanqalazo olucetywayo namhlanje eAmsterdam ngokuchasene ne-COVID-19 curbs lwarhoxiswa emva kodushe eRotterdam.
Yayiyenye yezona zinto zaqhambuka ubundlobongela elamaDatshi kuba izithintelo ze-coronavirus zaqala ukumiselwa kulo nyaka uphelileyo. NgoJanuwari, abaqhankqalazi bahlasele amapolisa kwaye batshisa izitrato zaseRotterdam emva kokuba kuqaliswe ixesha lokufika ekhaya.
I-Netherlands ibuyele kwintshona yeYurophu yokuqala yokuvalwa kwexesha lasebusika kwiveki ephelileyo. Izithintelo, ezichaphazela iindawo zokutyela, iivenkile kunye nezemidlalo, kulindeleke ukuba zihlale zisebenza kangangeeveki ezintathu.
The elamaDatshi izama ukulawula igagasi elitsha le-coronavirus, ngamatyala amatsha angaphezu kwama-21,000 axeliweyo izolo.
Urhulumente waseDatshi ngoku uqwalasela ukungabandakanyi abantu abangagonywanga kwiibhari kunye neeresityu, evumela ukufikelela kuphela kwabo bagonywe ngokupheleleyo okanye baye baphola kwesi sifo.